नेकपा फुटीसकेको छ तर, महंगो गाडीको सिसाजस्तै त्यहीँभित्र खुचमुचीएर अडेकाे छ « Sansar News
३१ असार २०७७, बुधबार १३:२१
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक विवादका कारण गम्भिर संकटमा छ । आन्तरिक विवाद चुलिरहँदा पार्टी विभाजन नजिक पुगेको जस्तो पनि देखिएको छ ।
पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचका ‘वान टु वान’ वार्ता र सम्वाद अनि शीर्ष तहका नेताहरु बीचको पटक–पटकको छलफल निष्कर्ष बिहिन बन्दै गईरहेका छन् । पार्टी विवाद चुलिएकै बेला आकस्मिक रुपमा गरिएको संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा र निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको दल दर्ताको घटनाले थप नेकपाभित्रको कसरतलाई संकेत गरेको छ । जुन घटनाले नेकपालाई विभाजनको संघारमै पुगेको संकेत गर्दछ ।
संसार न्यूज डटकमले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका बारे नेकपाकै प्रभावशाली नेता राम कार्कीसँग कुराकानी गरेको छ । संसार न्यूजका सन्देश अर्यालले नेता राम कार्कीसँग नेकपा विवाद र समाधानबारे केही भलाकुसारी गरेका छन् । नेता कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपाभित्रको विवादलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? कता जाँदैछ नेकपा ?
अहिले देखिएको विवादमा वैचारिक तथा राजनीतिक पक्षको निकै अभाव छ । मुख्यरुपमा राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षा र संस्कृतिमा जुन खालको नवउदारवाद हाबी छ, त्यो नवउदारवादको बाटो छोडेर समाजवादी बाटोमा लैजाने विषयमा विवाद हुनुपर्ने थियो तर त्यसमा विवाद भएन । अहिलेको लडाईं व्यवस्था परिवर्तनमा छैन् । यहाँ यहि व्यवस्थाको अगाडिको सिटमा को बस्ने र पछाडिको सिटमा को बस्ने भन्नेमै देखियो । विवाद सिर्जना हुनुमा दुई पात्रका कार्यशैली, हठधर्मिता, इश्र्या, आसत्तीलगायतका तमाम चीजले काम गरेका छन् । त्यसकारण यी यस्ता विवाद आउनुलाई त्यति धेरै महत्व दिनहुँदैन् ।
के यो विवादभित्र सत्ता र शक्तिमा पुग्ने होडबाजी मात्रै छ ?
पार्टी एकता गर्दा जुन दुई जना व्यक्तिमा सबै अधिकारहरु सुम्पीने काम भयो, त्यो अधिकार कमिटीमा फिर्ता ल्याएको भए कमिटीमा वैचारिक राजनीतिक कुराहरु हुन्थ्ये तर त्यो अधिकार दुईटा व्यक्तिमै सीमित हुन पुग्यो । कमिटीमा फिर्ता गर्ने काम कहिल्यै पनि भएन । र, त्यसलाई कमिटीमा फिर्ता बोलाउने प्रयास पनि भएन । न त्यो प्रयास अधिकार लिनेहरुले गरे न त दिनेहरुबाट भएको छ । त्यसले गर्दा स्वभाविक रुपमा अधिकार प्राप्त दुई जना अध्यक्षहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुमा स्वभाविक रुपमा शक्ति पछाडिको अहंकार, आकांक्षा र अभिलाशा छ । त्यसले नै समस्या सिर्जना गराएको हो । कमिटी भएको भए कमिटीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हुन्छ तर कमिटीभन्दा माथि दुई व्यक्तिलाई राखिदिए पछि यस्तै हुने हो । कुनै देशले दुई जना व्यक्ति संविधानभन्दा माथि छ भन्यो भने त्यो देशको हालत के हुन्छ होला ? सबैले सामान्य कल्पना बाटै थाहा पाउन सकिन्छ ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा, पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति अनि केन्द्रीय समितिदेखि अन्य संरचनाहरु त पंगु रैछन् भन्न अर्थ आयो । के त्यस्तै नै हो ?
अहिले पार्टीभित्र देखिने गरि रहेको कमिटी दुईवटा मात्रै छ (सचिवालय र स्थायी समिति)। केन्द्रिय समिति भनेको त एउटा संसद जस्तो छ । खाली त्यसले ताली बजाएर सहयोग गर्नु बाहेक अरु केहि छैन् । ४५० जनाको जम्बो केन्द्रिय समितिमा कसरी छलफल हुन सक्छ ? त्यसलाई के अर्थ दिने त्यो तपाईंलाई नै जिम्मा दिएँ ।
स्थायी समिति बैठकमा केहि एजेण्डाहरु पनि थिए । तपाईंले पनि देख्नुभयो । के ति एजेण्डाहरु अर्थहिन हुन् ? के दुई अध्यक्षभन्दा बाहेक एजेण्डा थिएनन् ?
खै अन्य एजेण्डा त बाहिर आएकै देखिएन त । उहाँहरुको मन–मनमा थियो भने त के जान्नु र ? तर एउटा कुरा व्यक्तिलाई ‘रेगुलेट’ गर्ने भनेको कमिटीले हो । तर, यहाँ कमिटी सबै अधिकार सुम्पेर लाचार बनेको छ । अनि त्यहाँ स्वभाविक रुपमा एक नम्बर नेताको हठधर्मिता बढि देखिन्छ । मैंले भनेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने छ । सरकार सञ्चालनमा पनि पार्टीसँग कुनै वास्ता मतलब छैन् । किनभने सरकार पनि पार्टीको सबैभन्दा ठूलो मान्छेले हाँकेको छ । पछिल्लो अवस्था हेर्दा त जनतासँग पनि नडराउने स्थितिमा पुगेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । त्यसले स्वभाविक रुपमा दुर्घटना तिर लैजाने हुन्छ ।
विभाजन भनेर नेकपाभित्र देखिने गरि विभाजन भईसकेको छैन् । पार्टी विभाजन, महंगो खालको गाडीमा ढुंगाले लाग्दा सिसा फुटेर तल नझर्ने तर त्यहिँ खुचमुचीएर बस्ने भने जस्तै भएको छ । अहिले हाम्रो नेकपा त्यहि अवस्थामा छ । फुटेको छ तर त्यहिँ भित्र खुचमुचीएर बसेको छ ।
दुई अध्यक्षको हठले पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेकै हो त ?
विभाजन भनेर नेकपाभित्र त्यस्तो वैचारिक विभाजनको अवस्था छैन् । महंगो खालको गाडीमा ढुंगाले लाग्दा सिसा फुटेर तल नझर्ने तर त्यहिँ खुचमुचीएर बस्ने भने जस्तै भएको छ । अहिले हाम्रो नेकपा त्यहि अवस्थामा छ । फुटेको छ तर त्यहिँ भित्र खुचमुचीएर बसेको छ ।
पार्टी नै फुटी सक्यो भनेको पनि सुनियो । तर पछिल्ला केहि कसरतले पार्टी जोगिएको भन्ने पनि छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
एउटा कुरा यस्तो खालको मेल अनि यस्तो खालको झगडाको कहिल्यै अन्त हुँदैन् । यो दुई सातापछि फेरि त्यस्तै हुँदैन् भन्ने केहि छैन् । व्यक्ति व्यक्तिका कुरा मिल्दैन् भनेर नै कमिटी बनाएको हो । सबै व्यक्तिको एउटै सोंच हुन्थ्यो भने त किन कमिटी वा पार्टीको निर्माण हुन्थ्यो र । पार्टी भनेकै विपरितामा एकता हो । मान्छेका विभिन्न सोंच हुन्छन्, प्रवृत्ति हुन्छन्, तिनिहरुको बीचमा टकराव हुन्छ अनि त्यसले नै गति दिन्छ भनेर पार्टीको निर्माण भएको हो । त्यसैले यस्तो झगडा त अहिले मिल्ने तर फेरि १५ दिनपछि फेरि अर्को विषयमा झगडा पर्ने हुन्छ ।
योभन्दा अगाडिका समयमा भारतीय नेता तथा कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरुलाई भेट्न नेताहरु होटल होटलमा धाएको सुन्थ्यौं । तर अहिले शक्तिशाली देशको राजदुत हाम्रो नेताको घर–घरमा आउनु त सम्मानजनक विषय होला नि ! होटल–होटलमा कुँदेको त सबैले देखेकै हो ।
पार्टीको आन्तरिक विवादमा छिमेकी देशको सक्रियता पनि निकै देखियो । छिमेकीले नै मिलाईदिनुपर्ने कस्तो पार्टी अनि कस्तो झगडा ?
भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई सम्झ्यौं भने, नाकाबन्दी पछि हामीसँग चीन निर्विकल्प छिमेकी देश थियो । तीन तिरबाट घेरिएको देशले नाकाबन्द गर्दा उत्तरी चीनको साथ खोज्नु अस्वभाविक होइन् । चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध बन्नु त भारतले बाध्य पारेको हो । भारतले नाकाबन्दी गरिसकेपछि हामी बाध्य भएर चीनसँग नजिक हुन पुगेका हौं । यो विषयमा हामीले छनौट गरेको विषय होइन भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।
चिनियाँ पक्षले सम्मान जनक रुपमा नेकपाको विवाद मिलाउन विशेष भूमिका खेलेको छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन् नि ?
घरभित्र झगडा परेपछि छिमेकीलाई चाँसो स्वभाविक रुपमा हुन्छ । त्यो चाँसो भारतलाई पनि भएको होला । तर भारतले पहिलै हामीलाई निचोरेर बाध्य पारेको हुनाले उसँग हाम्रो बारेमा भित्रि चाँसो दिने नैतिक बल छैन् । तर अर्को छिमेकीले स्वभाविक रुपमा नेपालमा स्थिरता रहोस् भनेर सफा व्यवहार गर्नुलाई किन आपत्ति जनाउनु पर्यो । चीनमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेको हुनाले त्यहाँको पार्टीसँग हाम्रो भाइचार सम्बन्ध छ । भाइचार सम्बन्ध रहेको देशले हाम्रो राम्रो रहोस्, स्थिरता रहोस् भनेर कामना गर्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न । मुख्यकुरा हामी दुवै देशलाई हाम्रो भलो चिताउन पाउनुहुन्छ तर, हाम्रो भलो के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले नै निर्णय गर्ने कुरा हो ।
कुटनीतिक सम्बन्धका बारे पार्टी र सरकारको आ–आफ्नै नियम र प्रक्रिया हुन्छ । तर यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, र ३/३ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग एउटा राजदुतले भेट्दै गर्दा कसैसँग कुनै खालको सरोकार राखेको देखिएन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
पार्टीका नेताहरुसँगको भेटघाटको विषयमा हाम्रो विदेश विभाग प्रमुख कमरेड माधव नेपाल जीले समन्वय गरिरहनु भएको छ । बाहिर नआएपनि उहाँले हामीलाई यी विषयमा जानकारी गराईरहनु भएको छ । कुनै महत्वपूर्णं विषय भएको खण्डमा उहाँले स्वभाविक छलफल आयोजना गरि हाल्नुहुन्छ । उहाँसँग कसैको भेटघाट भयो भने पनि त्यो विषयमा पनि सबैलाई जानकारी गराउनुहुन्छ । यहाँ अरु कमिटी सिस्टम नभएपनि उहाँले निकै व्यवस्थित ढंगले काम गरिरहनु भएको छ । भने अर्को सरकार तिरको पाटोमा पनि तत् तत् संरचना अनुसार समन्वय भईरहेको छ ।
तपाईंसँग यसअघि पनि विदेश विभागमा रहेको अनुभव छ । नेकपाको विदेश विभागको एउटा भूमिकामा रहँदै गर्दा दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ ?
यी दुवै हाम्रा छिमेकी देश हुन् । दुवैसँग उस्तै राम्रो सम्बन्ध राख्ने हाम्रो अभिष्ट छ । भारतसँगको सम्बन्ध अहिले केहि खजमजिएको छ । तर पनि जनस्तरको सम्बन्ध राम्रो छ । भारतका लेफ्ट पार्टीहरु, वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक मस्तिष्कका स्वतन्त्र विचार राख्ने मान्छेहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । हामी दुवै देशमा जनस्तरको सम्बन्धलाई अझै राम्रो बनाउन चाहन्छौं । चीन अलि भारत जत्तिको खुल्ला समाज छैन् । तर जहाँसम्म भारत सरकारले गरेका कामकारबाही छन् ति हामीलाई पाच्य भएन् ।
अन्त्यमा, नेकपा विवादतर्फ नै हेर्दा, एक साताको लागि स्थायी समिति बैठक स्थगित छ । पछिल्ला एक्सरसाईजलाई हेर्दा विवाद समाधान उन्मुख हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । यहाँले ठोस रुपमा के–कस्ता सहमती भए विवाद साँचो अर्थमा समाधान हुने देख्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरा कमिटीमा अधिकार फर्किएर आउनु पर्छ । र, त्यो कमिटीले वैचारिक राजनीतिक मुद्दाहरुलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ । अनि नीतिअनुसार नेताको चुनाव हुनुपर्छ । जो नीतिप्रति बफादार छ त्यसले नै नेतृत्व गर्ने अवस्था आउनुपर्छ ।
स्थायी समितिमा भएका साथीहरुले पुरानो स्वार्थ समुहलाई भत्काउनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । त्यहाँ विचार समुहका आधारमा भन्दा स्वार्थ समुहका आधारमा गुटहरु बनेका छन् । पार्टीभित्र समुह–समुहमा टक्कर हुन्छ तर त्यो टक्कर विचार र राजनीतिमा आधारित हुनुपर्छ । विचारधाराका कुरा ल्याउनसाथ त्यहाँ तर्क वितर्कका कुरा भईहाल्छ । त्यसको आधारमा बन्ने पक्ष विपक्षले नै पार्टीलाई गति र जीवन दिने हुन्छ । यस्तै खालको गुटले उपगुट सिर्जना गर्छ र पार्टी टुटफुटमा जान्छ ।
विचार र राजनीतिको विषय सुरु गरेपछि महाधिवेशनमा जाने र नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्छ ।